Abadlali yochungechunge 'Abangane' ke manje
Mhlawumbe, akekho okudingeka ukuchaza ukuthi ngokwakhe Abangane ewuchungechunge yethelevishini. Le phrojekthi kungokwalabo esigabeni yemikhuba yehlelo. Abezinye Izizwe ngosizo bafundisa isiNgisi okuxoxa nabaseMelika namanje ukukopisha isitayela ingubo nendlela obaphatha ngayo abanye, okuyinto abadlali ezahlukene "Abangane" chungechunge. Phakathi naleso sikhathi, ngoba kuvalwe iphrojekthi Sekuphele iminyaka engaphezu kuka-10. Njengoba isiphetho abadlali abayisithupha ehola izindima?
Uchungechunge oluthi "Abangane"
I asiwona umdlalo wethelevishini umshayeli waphuma Septhemba 22, 1994 futhi kusukela eminyakeni ke phezu 10 zonke izibukeli ekwindla alindele umhlangano entsha kubalingisi zakho ozithandayo: uRaheli, Monica, Phoebe, uRoss, Chandler futhi Joey.
Ngaphezu izinhlamvu eziyisithupha eziyinhloko e "Abangane" idonse indaba ezithakazelisayo nge uthando unxantathu, begodu bazibandakanya iziqephu eziningana izinkanyezi ezinjalo ezifana Julia Roberts, Bruce Willis, Tom Selleck, Reese Witherspoon, Christina Applegate, Denis DeVito nokunye. D.
Abanye abadlali yochungechunge "Abangane" lapho nje ngaqala ukudubula, ayaziwa, kodwa iphrojekthi uyikhazimulisile kubo emhlabeni wonke, okwenza ngisho ocebile. Ngakho kwesinye isiqephu ngenkathi kuqala, ngamunye "segolide eziyisithupha" wathola 20 000 zamaRandi, futhi kusukela lwesishiyagalombili, baba zazikhokhelwa ngenxa 1 million isiqephu ngasinye.
Ngemva asiwona umdlalo wethelevishini ivaliwe, eziyisithupha kulezi abadlali bakwazi ukugxila umsebenzi wakhe solo.
Lokhu umlingisi ethinta inhliziyo kudlalwa Ross Geller, ababengamthandi inhlanhla bo owakwakhe. Ngaphambi iqhaza kule phrojekthi, uDavide wakwazi izakhe njengoba kumdlali kakhulu, Starring ifilimu "Ukuwela Ibhuloho" futhi "bucks Samashumi Amabili." Wayengahlezi kuphela eyokuqala livunyelwe indima abaholayo "Abangane" ngaphandle olunye futhi uvivinyo, kodwa futhi udale uhlamvu ngqo ubuntu bakhe. Ngakho njengoba uDavide wayengumJuda, nokuthi Ross lakhe bakwenza lokho.
Ngemva kweminyaka eminingi umsebenzi parallel ewuchungechunge yethelevishini Schwimmer inkanyezi kwamanye amafilimu. Isenzakalo esidume kunazo zonke bangabantu "Ukuqabula a Fool," "umfundi Apt" futhi "Six Seven Days Nights."
Ngaphezu esebenza ithalente, uDavide wazibonakalisa umqondisi onekhono. Ngakho wathatha ezinye chungechunge "Abangane" futhi "Joey."
Ngemva kokuphothulwa Abangane, Schwimmer waqhubeka inkanyezi, kodwa ekusekeleni izindima ( "Big Lutho," "Lutho Kodwa iQiniso"). Waba futhi umqondisi opholile ezimbili: Trust Run fatboy, run.
Abanye ngephutha sikholelwe ukuthi uDavide waba ngaphansi yimpumelelo kunamanye abadlali "Abangane" chungechunge. Manje wasusa engasaphapheme ngendlela ngesikhathi zenith ngodumo lwakhe, kodwa uyaqhubeka ukuba baqonde futhi umeme ukudlala izinhlamvu ezithakazelisayo, ezingaphezu kuka okufanayo Math LeBlanc.
Endabeni yobuhlobo bayo nge nozakwethu "Abangane", kuyinto abangane nge umlingisi Mettyu Perri. Ngaphezu kwalokho Schwimmer iqhaza njengoba inkanyezi yisimenywa sitcoms, lapho indima esemqoka eyadlalwa Math LeBlanc ( "Iziqephu") futhi Lisa Kudrow ( "I-Web Ukwelashwa").
Abalingisi "Abangane" uchungechunge: Jennifer Aniston
iqhawe Bathandekayo Devida Shvimmera kwaba sthandwa zobugovu Reychel Grin. Wayedlala Jennifer Aniston.
Njengomhlaba nezinye abadlali, "Abangane" uchungechunge (ngaphandle Schwimmer), actress akazange ngokushesha lawela indima. Ekuqaleni, kwakufanele yaba nezigaba eziningana ukulalela ngaphambi sivunyiwe. Kuyaphawuleka ukuthi Aniston ekuqaleni auditioned ngoba indima Monica.
Ngaphambi Abangane Jennifer kwakungeyona kakhulu owaziwa. Kudlala ochungechungeni ithelevishini "Herman sika Head" futhi "Quantum Leap", naye wayekholelwa ukuthi impumelelo yakhe abakwazi ukubona esebenza ikhefu, ngakho wayecabanga ukushiya mkhakha. Yilokho nje impumelelo "Abangane" kwamsiza abe inkanyezi ezingeni emhlabeni, futhi wathandwa "Emmy" futhi "Globes Golden".
In parallel iqhaza uchungechunge sethelevishini, actress kumafilimu ezifana "Isithombe esihle," "The Good Girl," "Kanye Came Polly" futhi "Bruce uMninimandla onke. '
Rumour has it ukuthi ngibe usaziwayo, Jennifer zanquma ukulishiya "Abangane", ekubeni umqalisi salokhu kuvalwa phrojekthi.
Kuyaphawuleka ukuthi kwaba Aniston ephethwe ukwenza umsebenzi brilliant kakhulu amabhayisikobho. Ngakho, kusukela ngo-2004, umdlali ngenkuthalo isuswe Awama-Melodrama kanye namahlaya ethelevishini "Rumour Has It", "Isithembiso - Yini Lokho Into You," "I Bounty Hunter", "Vele uye nalo", "Thina - the Millers 'nabanye. Naphezu uthando izilaleli elolwazi Jennifer kancane kancane sashintsha saba inkanyezi amabhayisikobho isigaba B, elitholakala akazange akuvimbele ukukhandwa wakhe ukuze ithandwe kule mkhakha.
Eminyakeni yamuva, Aniston eyaduma hhayi kakhulu izindima zakhe njengoba inani inhlebo ayekubona lady wakhe. Lokhu lula yokuthi umyeni wakhe wangaphambili - Brad Pitt amshiya actress abadumile Andzheline Dzholi. Ngemva kwalokhu isehlukaniso ihlazo, abaningi wabukela Jennifer amanoveli nge ukunakwa ezingaphezu kuka impumelelo kwakhe komsebenzi.
Njengoba Schwimmer, Eniston wazama wayezibheka njengembali evamile, umqondisi. Wathatha isithombe: Igumbi 10 futhi ezinhlanu.
Jennifer namanje abangane nge Kortni Koks ngisho baba ummeli wesifazane endodakazini yakhe. Ngaphezu kwalokho, yena inkanyezi ku ewuchungechunge yethelevishini "Ukungcola" futhi "Cougar Town," lapho indima esemqoka udlalwa by umngane wakhe UCourtney.
Ngubani odlala fixated ku ubumsulwa bbw wangaphambili Monica - Kortni Koks, kuya "Abangane" usefake kudlalwa kumafilimu ambalwa ezinkulu ( "Cocoon: I Buyisela", "Mnu Destiny"). Ngaphezu kwalokho, waba yisaga njengesibonelo ngokudlala ukukhangisa Tampax. Ngokuza Friends of isampuli, Courtney ahlinzekwa indima uRaheli, kodwa yena kwaba uhlamvu anentshisekelo Monica, okuyinto yena kamuva ukudlalwa.
Kanye obhekwe udumo njengomdlali waseshashalazini ka "Abangane", Courtney wamenywa ukudlala e-movie enkulu-isabelomali. Ngakho yena okunenkanyezi ifilimu "Eys Ventura", "Yonke noma Lutho", "Bedtime Stories" futhi uchungechunge horror amafilimu "Scream".
Kuyaziwa ukuthi abanye abadlali yochungechunge "Abangane" baphoqeleka ukuzidela ngenxa iqhaza kulo eyaziwa (isibonelo, Math LeBlanc obudaywe izinwele zakhe). Ukuze Kortni Koks - lona liye laba yitshe yisisulu impilo yakhe. Sekudlule iminyaka engaphezu kwengu-10 ukuqopha, actress umbono eyinhlekelele yawohloka, kodwa uhlamvu wakhe akakwazanga ukugqoka izibuko kanye lens yayiyobizwa yabenyezela uma ngokudubula. Ngenxa yalokhu, ngo-ezinye izigcawu, yacishe wangabona abalingani babo. Futhi, ngenkathi esebenza 'Abangane "actress kwesisu izikhathi eziningana.
Phakathi ukuthwetshulwa Abangane actress iphethwe yini ukushada uDavide Arquette, ngenxa yini eyamenza washintsha igama lwakhe lokugcina lokuya Cox-Arquette. Ngenkathi lokugcina 10 iziqephu ababukeli unake waphawula ukuthi ukuba umdlali sasisendaweni, futhi ngemva kwezinyanga ezimbalwa ngemva sokuvalwa "Abangane" Courtney waba umama. Ngeshwa, eminyakeni embalwa kamuva inyunyana Cox-Arquette ngiyaquleka.
Ngemva yokuvala Abangane actress isibe kancane othandwayo kuleli amabhayisikobho, kodwa kumabonakude kwaqhubeka umeme ukuvela. Yena inkanyezi ku asiwona umdlalo wethelevishini "Ukungcola" futhi "Cougar Idolobha" futhi isimenywa inkanyezi ku "umtholampilo", "I-Web Ukwelashwa", "Ukulungele!" Futhi Drunk Umlando.
Njengoba Aniston futhi Schwimmer, Cox wazama usezakhele igama njengomqambi filmmaker. Wathatha off esondweni Tall Zezıhlabane Okwamafoi okuhanjwa nawo.
Lo mculi kwaba yimpumelelo kakhulu phakathi bonke abadlali besilisa yephrojekthi. Ngaphambi "Abangane" Yena ubonakele kumabonakude, kufaka ekhatsi "Beverly Hills, 90210, kodwa ukufohla kwaba nendima edlalwa yi-obhuqayo Chandler Bing.
Phakathi ukuqopha e Abangane Perry futhi uvele uchungechunge sethelevishini "John Larroquette Bonisa", "Umtholampilo», Caroline eMzini, Saturday Night Live, ngisho izwi ngokwakhe "The Simpsons."
Kusukela ngo-1997, Mettyu Perri inendima enkulu kule ahlekisayo, "washesha kwenza imfucuza", "ezintathu Tango", "I Yards Whole Nine" futhi "imikhonyovu."
Ngeshwa, abadumile, waqala ukuphuza ngokweqile nezidakamizwa, okuyinto pretty okuningi abathintekayo ukubukeka kwakhe. Ngenxa yokunakekela Devida Shvimmera, Perry wakwazi ukubhekana ne eziluthayo, kodwa ngemva ukuvala "Abangane" sathula esimema izindima eziyinhloko e-movie. impumelelo yakhe enkulu Kwakubonakala e "17 Futhi" futhi "lwalutho."
Kodwa ku-TV Mettyu Perri waqhubeka umeme ngenkuthalo. Yena izinkanyezi ku uchungechunge sethelevishini "Mnu Sunshine", "Ukulungele!" Futhi "Izithandani Sweet". Ngaphandle Perry iqhaza kwezinye izinhlelo ze-TV ethandwa: "Umfazi efanele," "Cougar Town," "I-Web Ukwelashwa," etc ...
Ngaphezu kwalokho Devida Shvimmera, yena nabangane nge Kortni Koks. Ngemva kwesehlukaniso, lona wamuva kwaba namahemuhemu ukuthi kukhona la abadlali "Abangane" chungechunge. Khona-ke futhi manje, lolu lwazi alikaqinisekiswa, nakuba Courtney noMathewu, futhi behluleka kuphika kutsi lesimangaliso.
Record umnikazi kunombolo iziphakamiso ku "Emmy" indima yakhe njengomPristi Fibi Buffe Lisa Kudrow baba. Ngaphambi "Abangane" empeleni babungekho, nakuba co-kumafilimu eziningi. Umlingisikazi wafika iphrojekthi ngenxa yokuthi ngaphambili abadlale twin-udade Phoebe - ". Mad About You" Ursula ku asiwona umdlalo wethelevishini
Phakathi ukuthwetshulwa "Abangane" Lisa wamenywa ukudlala ku-movie. Isenzakalo esidume kunazo zonke imidwebo yakhe iminyaka 1994-2004. - "Romy futhi Michele sika Isikolo samabanga aphezulu Reunion," "Hlaziya Lokhu" futhi "Hlaziya Ukuthi".
Ngemva kokuvalwa Abangane, Kudrow retrained ku izwi umdlali waseshashalazini. amaphrojekthi Okuphawulekayo ukuthi uzwakalise - "The Simpsons", "Hercules", ". Bulka Amathiphu"
Futhi actress nengxenye ekudalweni nenomakhanya ku asiwona umdlalo wethelevishini "The Return" futhi "I-Web Ukwelashwa."
Lo mculi, empeleni wayengumdala ikhophi uhlamvu lwakho. Thanda iqhawe lakhe Joey, Math LeBlanc - nice Italy kodwa owazalelwa eMelika, ngubani Sekuyisikhathi eside iphazanyiswe izindima elincane ewuchungechunge yethelevishini futhi izimakethe ezishibhile.
Ngo okufanayo nalokhu kudubula e Abangane, Math ukudlalwa ezincane ifilimu productions, kabuhlungu ezifana nalezo lapho udubule Joey. impumelelo yakhe eyinhloko kule nkathi kwadingeka indima Inoveli "Angels Charlie sika."
Ngemva kokuvala le "Abangane" LeBlanc wamenywa ukudlala ekusekeleni lo msebenzi - ". Joey" le asiwona umdlalo wethelevishini Ngeshwa, kulolu chungechunge tv, wahlala phezu emoyeni zonyaka 2 kuphela.
Ngemva kwalokhu ukwehluleka eminyakeni embalwa umsebenzi umlingisi, ngezinye izikhathi wenza njengo inkanyezi yisimenywa "I-Web Ukwelashwa," Lizy Kudrou. Nokho, ngo-2011 umdali "Abangane" - Devid Kreyn wammemela ukudlala yena asiwona umdlalo wethelevishini yakhe entsha "Iziqephu." Le phrojekthi abe ethandwa futhi yathatha 5 zonyaka, ngokuletha Leblanc "Golden Globe".
Uchungechunge oluthi "Abangane": nabalingisi indima yesibili
Ngaphezu okungenhla abadlali abayisithupha ngesikhathi lesi umklamo nezinye abaculi abadumile. Phakathi kwabo, Pol Radd (umyeni uFibhi sika - Mike Hannigan), asanda kudlalwa indima Intuthwane-Man e amateyipu ambalwa kinovselennoy Marvel. Futhi gqizisa umdlalo wakhe show "Abangane" umlingisi (ngezansi) Elliott Gould (Ross kanye lishabalala ubaba), Tom Selleck (othandekayo Monica Richard Burke), Dzhovanni Ribizi (umfowabo uFibhi), Dzheyn Sibbett (ex-unkosikazi kongqingili Ross), Aisha Tyler (isib owesifazane, Joey, futhi ngemva Ross), kanye nabanye.
Naphezu kweqiniso lokuthi iphrojekthi "Abangane" Sekuyisikhathi eside ivaliwe, abaningi kubalandeli bakhe ungashiyi Ngethemba ukuthi kuzoba enye inkondlo elama. Kuze kube manje-ke kutsi loku. Phakathi naleso sikhathi, abadlali "Abangane" uchungechunge manje (isithombe ngenhla) aye aqhubeka engabantu ozithandayo phakathi izibukeli, nakuba kwaba eziningi iminyaka.
Game Sims FreePlay: ukudlula imisebenzi
Igugu. Uyini imikhumbi eyayithwala izinto eziyigugu kanye nomcebo umhlaba?